Derince Çenesuyuလမ်းဆုံရှိလုံခြုံရေး RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliယာဉ်မောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Derince Çenesuyuလမ်းဆုံမှာတိုးလာ
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်လိုအပ်သောလမ်းများပေါ်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပြုပြင်နှင့်စည်းမျဉ်းအကျင့်ကိုကျင့်ဆက်လက်။ ယာဉ်ကြောသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချရန်နှင့်လမ်းဆုံ၌ပြုလုပ်သောလမ်းဆုံ၏လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လမ်းဆုံ၏ဒါဇင်ခရိုင်သိပ္ပံဌာနသိပ္ပံဌာန၏အဖွဲ့များ။ လေ့လာမှု၏နယ်နိမိတ်အတွင်းလမ်းဆုံ၌ခိုလှုံရေးအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားပြီးလက်ရှိဒုက္ခသည်များကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကဏ္ transportation သည်အရေးကြီးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုမြို့တော်တစ်လျှောက်တွင်ပြုလုပ်နေစဉ်လိုအပ်သောနေရာများတွင်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်လျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိပါ။ ဤအချိန်တွင်လေ့လာမှုများကို Derince Çenesuyuလမ်းဆုံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံရေးရာဌာန၏မြှုပ်နှံထားသည့်အလုပ်နှင့်လမ်းဆုံအစီအစဉ်တွင် D-100 ၏ဝင်ပေါက်တွင်ခိုလှုံရာအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဒုက္ခသည်များလည်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ D-100 ၏ဝင်ပေါက်တွင်ချဲ့ထွင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး 250 မီတာလမ်းမကြီး၊ 100 ခိုလှုံရာနယ်စပ်နှင့် 30 ကုဗမီတာကွန်ကရစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Derince theenesuyu လမ်းဆုံ, အထူးသဖြင့်အဆိုင်းစတင်နှင့်အဆုံးသတ်နေရာ, နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းနာရီမော်တော်ယာဉ်သိပ်သည်းဆကြုံနေရနေကြသည်။ လမ်းဆုံတွင်ပျမ်းမျှလမ်းဆုံ၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကြောင့်ယာဉ်များသည်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဖြင့်ယာဉ်များသည်လမ်းဆုံကိုပိုမိုထိန်းချုပ်။ သတ်မှတ်ထားသောအမိန့်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ရန်သေချာစေခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောယာဉ်များစုဆောင်းခြင်းကိုတားဆီးရန်နှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
TCDDnin Katıldığı 7. Karayolu Trafik Güvenliği…
TCDD Hemzemin Geçit Temasıyla 8. Karayolu Trafik…